DAAWO:Shacabka Gobolka Sool oo Puntland ka codsaday Dagaal deg deg ah oo Somaliland looga saaro Magaalada Laascaanood & Muuse Biixi oo loo sheegay in uusan Maamulkiisu…. – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
DAAWO:Masuul ka tirsan xisbiga UCID oo fashiliyey siraha Muuse Biixi & Arin aanan la filayn oo banaanka timid 5 mins ago
Home 2018 July W.Gudaha, Wararka Maanta DAAWO:Shacabka Gobolka Sool oo Puntland ka codsaday Dagaal deg deg ah oo Somaliland looga saaro Magaalada Laascaanood & Muuse Biixi oo loo sheegay in uusan Maamulkiisu….
DAAWO:Shacabka Gobolka Sool oo Puntland ka codsaday Dagaal deg deg ah oo Somaliland looga saaro Magaalada Laascaanood & Muuse Biixi oo loo sheegay in uusan Maamulkiisu….
July 10, 2018 |by Wariye| 0
LAASCAANOOD(P-TIMES) – Xilli ay sii xoogaysanayaan xiisadaha dagaal ee u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland ayaa waxa ay ka codsadeen dowladda Puntland shacab weynaha ku dhaqan gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool in ciidamada Puntland ay soo qaadaan dagaal deg deg ah oo ay uga saarayaan ciidamada maamulka Somaliland guud ahaanba gobolka Sool, iyagoona dhanka kale hambalyo iyo bogaadin u diray madaxda Puntland. RIIX HALKAN OO KA DAAWO MUUQAALKA